UYIKHETHA NJANI IACCENT WALL KWIGUMBI LOKUHLALA - IINGCAMANGO ZEGUMBI LOKUPHILA
Eyona Iingcamango Zegumbi Lokuphila Uyikhetha njani iAccent Wall kwigumbi lokuhlala
Uyikhetha njani iAccent Wall kwigumbi lokuhlala
Apha sabelana ngendlela yokukhetha udonga olusisigxina kwisikhokelo segumbi lokuhlala ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo.
Udonga lweAccent lusetelwe ecaleni kwezinye iindonga kwigumbi elinika inkangeleko ethile ehlala idala indawo ekugxilwe kuyo. Udonga olusisigxina lunokwenziwa ngokupeyinta udonga umbala owahlukileyo, ulwenze udonga, okanye usebenzise izinto eziphakanyisiweyo ezinje ngamatye, izitena, iidrama, okanye ezinye izinto.
Iindonga zeAccent zisasaziwa kumakhaya amaninzi kwaye zivumela abaninimzi ukuba babonakalise isimbo sabo kunye nezinto abazikhethayo zoyilo. Elinye lawona macandelo anzima kakhulu okwenza udonga olusisigxina kukufumanisa ukuba loluphi udonga onokulukhetha.
Kwesi sikhokelo, siza kuthetha ngendlela yokukhetha udonga olusisigxina kwigumbi lokuhlala, ke iya kongeza isongezo sepanache ukuze wena kunye neendwendwe zakho nizonwabele.
Indlela udonga oluvakalayo oluphucula ngayo igumbi
Yintoni omele uyiqwalasele xa ukhetha udonga oluvakalayo kwigumbi lakho lokuhlala
Ngaba udonga lunento yokwakha?
Ngaba kukho iifestile kwigumbi lokuhlala?
Indawo yomlilo sisizathu esifanelekileyo sodonga olusisigxina
Ludonga luni amehlo akho utsalela kulo?
Khetha udonga oluzisa ibhalansi
Luqala phi kwaye luphele phi udonga?
Yintoni ehleli malunga nodonga?
Iindonga ze-Accent zongeza iindidi, ubunzulu, kunye nobukhulu kwigumbi. Igumbi lokuhlala ngokwesiqhelo lelona gumbi liphambili endlwini apho ubungaza iindwendwe kunye nosapho. Udonga olusisigxina likuvumela ukuba wenze indawo ekugxilwe kuyo kwaye uhlaziye isitayile sakho segumbi lokuhlala ngaphandle kokutshintsha igumbi ngokupheleleyo kwaye unokwenza igumbi lokuhlala libonakale likhulu okanye lincinci.
Inokuba yindawo yokubonisa umdla okanye ukuncedisa kwifenitshala okanye unyango lwefestile. Iindonga ze-Accent ziphucula igumbi xa zisebenza nayo yonke imihlobiso kunye nemibala ukuzisa ukuhlangana kunye nomdla.
Ukutshintsha igama emva komtshato kwi-ma
Kukho iindlela ezininzi ezenza udonga lube lukhetho olufanelekileyo kudonga olusisigxina. Olu luhlu lulandelayo lweempawu luya kunceda ekukhetheni udonga kwigumbi lakho lokuhlala ukuze upeyinte okanye ugqume ngokukhetha izinto okanye uhombiso.
Ukuba olunye lweendonga kwigumbi lokuhlala lune icawa yecawa enkulu ithambeka, imilo yejometri engaqhelekanga, okanye udonga olujikeleziweyo, ukuyipeyinta umbala owahlukileyo okanye imibala eliqela ekhanyayo okanye emnyama ngakumbi kwigumbi lokuhlala lonke yongeza ubukhulu obunobuqili.
iisuti zomtshato ezilishumi eziphezulu zamadoda
Ukuba udonga olunye lwegumbi lokuhlala lineefestile ezininzi, ezahlukeneyo Umbala wodonga ocacileyo Ipeyinti inokuqaqambisa umbono kwaye ibangele iifestile ukuba zithathe ubugcisa. Lumka ungakhethi umbala omnyama kakhulu njengoko unokugxininisa ukukhanya kwiifestile kakhulu.
Uhlobo lwendawo yomlilo, nokuba yeyorustic, yobukoloniyali, okanye yanamhlanje, ivumela ithuba elihle lokwenza udonga olugqithisileyo. Ukupeyinta udonga kuhle kodwa ukugqitywa kwendalo okunje ngamatye, izitena, ibhodi yokuqhwaba, okanye istucco esigubungela lonke udonga kunika indawo yokubasa umlilo ujongo.
Udonga olutsala iliso lakho kuqala xa ungena kwigumbi lokuhlala lenza ukhetho olukhulu eludongeni lwe-aksenti. Ukwenza igalari yobugcisa obuzinzileyo okanye ukongeza iishelfu ezininzi, ukugxadazela kunye nokugubungela lonke udonga, ukubonisa izinto eziqokelelweyo zenza udonga lwesandi oluphinda kabini njengomboniso.
Ukuba igumbi lokuhlala lide kwaye lixande, ukupeyinta udonga olusisigxina ekupheleni kwegumbi, udonga olufutshane, ulinganisa ubude obungathandekiyo beendonga ezisecaleni.
Umbala ofudumeleyo usondeza udonga ukuze upeyinte udonga lwangasemva lube mnyama izikwere ezibonakalayo kwigumbi. Ukuba igumbi lokuhlala lixande, linodonga lwangasemva nangaphambili olude, ukupeyinta enye okanye zombini umbala okhanyayo utyhala udonga ngaphandle, kunciphisa ukubonakala kwalo kubhityile.
Igumbi lokuhlala kunye udonga lwe-aksenti emnyama niche
Ukuba udonga lwegumbi lokuhlala lwandiselwa kwigumbi lokutyela okanye ekhitshini, ayisiyonto ilungileyo yokukhetha udonga lwe-aksenti, njengoko isiphelo esinye singayi kuba nasiphelo. Kukwanjalo nodonga olunee-degree ezingama-45 ezidibanisa kwenye indawo okanye igumbi.
Udonga olunesingqengqelo, ipiyano enkulu , okanye mfutshane Iishelufa zeencwadi yenza udonga olukhulu lwe-aksenti ukutsala umdla kwinto yefenitshala okanye kwincoko yencoko. Udonga olunefenitshala ende njengeishelufu yeencwadi okanye ikhabhathi ayinako ukwenza udonga olugqithisileyo kuba ifenitshala ifihle ubukhulu bodonga.
Nje ukuba uvavanye igumbi lakho lokuhlala kwaye uthathe isigqibo sokuba loluphi udonga olulungileyo njengodonga lwe-aksenti, akukho mithetho ithile yokuhombisa ukuya kuthi ga kwinto oyenzayo ngayo.
Usisi womthetho umbono wesipho
Gcina ukhumbula ukuba udonga olukhethileyo lunokuphela lukhangeleka ngokungalunganga ngokungathi aluhambi negumbi, okanye lingenza incoko yengxoxo kwigumbi lakho lokuhlala. Ezi izimvo zodonga olusisigxina yindlela elula yokongeza isitayile esimangalisayo ngaphandle kokutshintsha igumbi lokuhlala.
Ukutshintsha kwegama emva komtshato
amakhonkco ethembisa ngedayimane amhlophe
yintoni impahla esesikweni yomtshato
indlela yokuxelela ukuba yidayimani yokwenene